Dowladda Soomaaliya oo beenisay in dhaqaale loo balanqaaday si ay xiriirka ugu jaraan Qadar | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Dowladda Soomaaliya oo beenisay in dhaqaale loo balanqaaday si ay xiriirka ugu...
Dowladda Soomaaliya oo beenisay in dhaqaale loo balanqaaday si ay xiriirka ugu jaraan Qadar
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa beeniyay wararka sheegaya in arrimo dhaqaale loogu balan qaaday dowladda Soomaaliya dhacdooyinkii u dambeeyay ee la xiriira arrimaha Khilaafka Khaliijka.
Wasiirka Warfaafinta ayaa sheegay in haba yaraatee wax dhaqaale ah aan looga hadlin kulamadii ku saabsanaa Khaliijka
“Warbaahinta waa inay iska ilaaliyaan wararka been abuurka ah ee ka durugsan xushmada iyo dhaqanka diblomaasiyadda”ayuu yiri.
Wasiir Yariisow oo intaa ku daray in Saxaafadda kula dar daarmayo inay ka fogaadaan wararka aan salka laheyn ee wax u dhimi kara karaamada iyo sharafta qaranka iyo tan dalka aan walaalaha nahay.
Wariye ka tirsan Wargeyska Sharqal Awsad oo u dhashay Qatar ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in Madaxweyne Farmaajo uu iska diiday 80-milyan oo dollar, si uu xiriirka ugu jiro dowladda Qatar.
Arrintan ayaa qabsatay warbaahinta qaar gaar ahaan qaar ka mid ah kuwa ka howlgala dalalka Khaliika, oo haatan ay ka dhex tolan tahay khilaaf aad u xoogan ka dib markii dalalka Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ay cunoqabatayn kusoo rogeen dalka aadka u yar ee Qadar, kaasi oo ah mid qani ku ah Gaaska kana mid ah wadamada ugu taajirsan caalamka.
Previous articleMas’uuliyiinta dowladda oo muddo 14 cisho loo qabtay inay ku diiwaan geliyaan Ilaaladooda iyo Hubkooda
Next articleXildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Maraykanka oo la toogtay